1. ခြောက်သွေ့သောရေပေါ်ငါးလေးများစက်သည်ရေနွေးငွေ့စက်ကိုမလိုအပ်ပါ, ထို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့သောငါးအတောင့်စက်သည်စျေးသက်သာပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်.
2. ရေစိုသောငါးမျှားစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစာတောင့်သည်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးအရည်အသွေးကောင်းပြီးအရည်အသွေးမှာအရည်အသွေးကောင်းမွန်။ ခြောက်သွေ့သော extruder နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအေးစက်အေးစက်ပါသည်.
3. ခြောက်သွေ့သောငါးပေါင်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်စိုစွတ်သောငါးလုံးလေးများထက်နိမ့်သည်, ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောငါးအစာတောင့်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးကျသည်.
ရေပေါ်ငါးတောင့်စက်သည်ငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအစာတောင့်များထဲသို့အစေ့များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်,ငါးခူ, ပုစွန်,ပြောင်းဖူး etc.With ကဏန်း,ပဲပုပ်, bean ကိတ်မုန့်) ကုန်ကြမ်းအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်အပိုင်းအစများ,အစာကျွေးလုံးလေးများအမျိုးမျိုးအတွက်သူတို့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည် ,ဝတ္ထုအသစ်, ထူးခြားတဲ့အရသာ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်သမားများအတွက်အာဟာရကြွယ်ဝသော၊, အသေးစားနှင့်အလတ်စားအစာစားစက်များနှင့်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ။ ဤငါးတောင့်စက်ထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြု၍ အစာအမှုန့်များတိုးချဲ့သည်, သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ချောမွေ့ဖွဲ့စည်း, ရေပေါ် 12 နာရီကိုရေညစ်ညမ်းရေမနစ်မြုပ်ကြဘူး, ပိုမိုမြင့်မားအမြတ်အစွန်းရှိသည်ဖို့အမိန့်ငါး disease.in လျှော့ချရန်ပိုးသတ်, အစာထုတ်လုပ်သူများနှင့်လယ်သမားများသည်ပိုမိုထိရောက်သောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်. မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, ငါးတောင့်စက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိငါးမွေးမြူရေးနှင့်အစာကျွေးသောအပင်များစွာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်. ဥပမာ, အင်ဒိုနီးရှားရှိငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ, စီးပွားဖြစ်ငါးအစာကဏ္ sector ပို။ ပို။ သာယာဝပြောတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်. ပို့ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဒေသတွင်းကုန်သွယ်ရေးတွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရန်, ငါးမုန့်ညက်သုံးကိရိယာများကိုခေတ်မီအောင်ပြုပြင်ရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်. နောက်ထပ်ကြီးမားသောငါးမွေးမြူရေးနိုင်ငံမှာနိုင်ဂျီးရီးယားဖြစ်သည်, သူတို့ရဲ့အစိုးရရဲ့ထောက်ခံမှုများနှင့်ရရှိနိုင်ကြီးစွာသောဒေသခံကုန်ကြမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်, နိုင်ဂျီးရီးယားရှိငါးအစာထုတ်လုပ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရှိသောစီးပွားရေးဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, ရေပေါ်ငါးတောင့်စက်သုံးသည့်အရေအတွက်တိုးများလာနေသည်.
ကုန်ကြမ်းသည်အမှုန့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်( ပြောင်းဖူးမှုန့် , မုန့်, ပြောင်းဖူးဓာတ်, ဆန်ဖွဲ, ),အသားမုန့်ညက်, အရိုးမုန့်ညက်, ငါးမုန့်ညက်, ပဲပုပ်မုန့်ညက် , အဆိုပါလုံးလေးများသို့ကုန်ကြမ်း feding မီ , ကုန်ကြမ်းနှင့်အတူ 60-80mesh ဖြစ်သင့်သည် 20-25%.
2. ရေစိုသောငါးအစာတောင့်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအစာတောင့်သည်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးအရည်အသွေးကောင်းပြီးအရည်အသွေးမှာအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးခြောက်သွေ့သော extruder နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအေးစက်အေးစက်ပါသည်။.
3. ခြောက်သွေ့သောရေပေါ်ငါးလေးများစက်၏စွမ်းရည်သည်စိုစွတ်သောငါးအစာတောင့်စက်ထက်နိမ့်သည်, ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောငါးအစာတောင့်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးကျသည်.